Nidaamyada Xakamaynta Milixda, Qalabka barkadda dabaasha - Buluugga
Lacagta: USD $
Unugyada Buluugga ah
Nidaamka Biyaha Fresh
Hal-abuurnimo cusub iyo fayodhowrka jiilka xiga ee barkadda, kuma duwana waxa ka soo baxa tuubada gurigaaga. Xirfadle khibrad uleh nidaamka biyaha saafiga ah.
Mar dambe laguma qasi doono dareeraha ama kaniisada gaaska koloriinta, la cabiray ama qasan. Hadda, blueworks waxay ku siinayaan xalalka jeermiska, waxaad si otomaatig ah u heli kartaa biyaha ugu nadiifsan, ugu jilicsan uguna amniga badan. Waxaan leenahay nidaam chlorinator cusbo iyo ionizer iyo ozone mustaqbalka si aan u bixino tayada ugu dambeysa ee tayada biyaha.
Injineerada Mareykanka, oo ay ansixisay Energy Star, khubaro soo saarta matoorrada bamka iyo darawalada, Blueworks ayaa halkaan kuugu diyaar ah waxa aad rabto bambooyin kaaga.
Si loo taageero nidaamkaaga chlorinator ee si xor ah u shaqeynaya si loo helo tayo biyo nadiif ah, nadiif ah, Blueworks waxay leedahay bedello ballaaran oo unugyo ah. Waxay yihiin kuwo la isku halleyn karo oo muddo dheer soconaya maadaama aan soo saarno wax ka badan 16 sano.
Blueworks waxay leedahay bambooyin xawaare kala duwan leh oo leh oggolaanshaha California Energy Star iyo ETL, Canda CSA Approval oo xaqiijinaysa inaad haysato bamka ugu habboon barkaddaada. Mashiinka barkadda ee VSP wuxuu noqon doonaa mid guud ahaan suuqa Mareykanka maaddaama ay waxtar badan leedahay si loo keydiyo tamarta.
Blueworks SPP1515VS Pool saar
Dabaasha Nidaamka Balli-biyoodka Balli-biyoodka BLSC
Chlorinator Cusbo BLPT
Blueworks IGP2115VS Mashiinka Xawaaraha Isbedelaya
Blueworks AGP1515VS Mashiinka Xawaaraha Isbedelaya
Blueworks Vsm Xawaaraha Fudud ee Isbedbedelka ...
Blueworks Solar Robotic Pool Nadiifiyaha
Blueworks Salinity Tijaabiyaha Qalabka
BLUEWORKS CORPORATION waxay ku takhasustay soo saarista iyo soo saarista qalab balaaran oo barkadaha dabaasha ah. Maaddaama aan nahay soo saare wax soo saar, waxaan laan ka dhignay NC, USA adeegga iibka kadib. Toban sano ka dib markii la ballaadhiyay, waxaan u kornay inaan noqono mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dabaasha ee muhiimka ah ee Mareykanka.
Badeecadaha waxaa ka mid ah, Cusbada Chlorinator-ka, Beddelka Unugga Cusbada, Qaybaha Nidaamka Saltwater, Pool Light, Qaylo-dhaanta barkadda, Wakhtiga barkadda, Pool Pump iyo wixii la mid ah.
Sida laga soo xigtay Cdc Ma jiraan wax caddeyn ah oo ah in Covid-19 lagu faafin karo aadanaha iyadoo la adeegsanayo barkadaha iyo tubbooyinka kulul. Hawlgalka saxda ah, dayactirka iyo jeermiska jeermiska barkadaha dabaasha iyo tubbooyinka kulul (Tusaale ahaan, jeermiska cudurka ee loo yaqaan 'Chlorine and Ionizer') waa inuu ka saaraa ama ka hawlgaliyaa fayrasyada sababa Covid-19.
Waxaan U Shaqeyneynaa Si Caadi Ah Inaan Ku Siino Moodallo.
6 maalmood usbuucii, laga bilaabo 8:30 am ilaa 4:30 pm
Ku saabsan Blueworks
Siyaasadda Soo Laabashada